Qiso Layaab,leh, Sawir Sababay In Uu Istaago dagaalkii Maraykanku La galay dalkii Koonfurta Vietnam | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Qiso Layaab,leh, Sawir Sababay In Uu Istaago dagaalkii Maraykanku La...
Qiso Layaab,leh, Sawir Sababay In Uu Istaago dagaalkii Maraykanku La galay dalkii Koonfurta Vietnam
Konton sano ka hor, ayaa uu taliyihii booliiska qaranka ee dalkii la odhan jiray Koonfurta Fiyetnaam, waxa uu si aanu isba dhibin u kaxeeyey maxbuus, oo uu geeyey badhtmaha magaalada la odhan jiray Saigon oo xilligaas caasimad u ahayd Koonfurta Fiyetnaam, laakiin hadda loo yaqaanno Ho Chi Minh. Kaddib inta uu shaaraca dhexdiisa istaajiyey ayaa uu baastoolad madaxa kaga dhuftay iyada oo ay ka muuqatay in aanu wax qiimayn ah u haynin ninkan, jixinjixii bani’aadamnimaduna ka dhintay, bartii ayaanu maydkiisa kaga tegey. Meel dhowr tallaabo u jirta waxaa soo taagnaa sawirqaade lagu magacaabo Eddie Adams oo ka tirsanaa wakaaladda AP, kaas oo inta uu ka faa’iidaystay fursaddaas taariikhiga ah ee muujinaysa arxandarrada ninkan, ka qaaday sawir waaray, oo sabab u noqday dhacdooyin badan, oo ay ka mid tahay in uu beddelay fikirkii raylcaamka dunidu ka qabay dagaalka Fiyetnaam.
Sawirka waxaa ka muuqda taliyihii booliiska Koonfurta Fiyetnaam Janaraal Eddie Adams oo inta uu dhabarka u jeediyey sawirqaadaha, gacanta bixid kala baxsaday, ta midigtana inta uu kala bixiyey, baastooladdii uu ku haystay, madaxa kaga haya maxbuuskan oo aan xidhnayn labbis ciidan ama wax caddaynaya in uu ahaa dagaalyahan ka tirsanaa jabhaddii Viet Cong oo sida oo kale loo yaqaannay jahbadda waddaniga ah ee xoraynta (NLF). Waxa uu ahaa urur hubaysan oo hantiwadaagga aaminsanaa, kaas oo intii u dhexeysay 1954 illaa 1976 kii, dagaal ba’an kala soo horjeeday dawladdii Koonfurta Fiyetnaam iyo Maraykanka oo ciidamadiisa u diray dalkasa si loo difaaco dawladda uu taageersanaa.
Ninka uu janaraalka booliiska haystaa gacantiisa ku dilay oo magaciisu ahaa Nguyen Van Lim in kasta oo da’diisu ay soddonaad ahayd, haddana muuqaal ahaan waxa uu u ekaa in uu da’daas aad uga yaraa, waxa aana wejigiisa ka muuqday cabsi badan iyo dareenka naxdinta leh ee uu ka qabay rasaasta ku soo socota.
Maalintii labaadba sawirka wiilkani waxa uu ku soo baxay bogagga hore ee wargeysyada Maraykanka oo uu ka mid yahay New York Times, waxa sida oo kale muuqaalkan oo fiidyow waqti gaaban soconaya ah baahiyey talefishanka NBC. Taas oo sababtay in sawirkan ay arkaan dadka Maraykan oo u arkay muuqaal fool xumo ku ah sharaftooda, oo muujinaya bahalnimada dawladda ay ciidamadoodu taageerayaan ee Koonfurta Fiyetnaam. Sawirkani waxa uu noqday dhimbiil hurisay cadhadii dadweynaha Maraykan ay kala horyimaaddeen dagaalka ay dawladdoodu kaga jirto Fiyetnaam oo aakhirkii sababtay in uu rayulcaamka dalka oo dhami diido.
Michelle Nickerson oo kaaliye-Baresare oo dhiga taariikhda ka ahaa jaamacadda Loyola oo ku taalla gobalka California ee dalka Maraykanka, si gaar ahna u daraaseeyey dhaqdhaqaaqii joojinta dagaalka ee xilligaas ka dhacay dalka Maraykanka ayaa yidhi, “Sawirkani waxa u udadkii ku dhaliyey cadho aad u weyn oo aanu abuuri kareen qoraal kasta oo arrintan laga sameeyaa.” Nicherson waxa uu intaas ku daray, “Sawirkani waxa uu soo turjumay runtii jirtay, oo uu u soo gudbiyey si aan la qiyaasi karin, marka la eego tirada dadka markii ay arkeen degdeg u qaatay go’aan ka soo horjeeda dagaalka”
Sawirkan waxaa la qaaday kowdii bishii labaad ee sannadkii 1968 kii oo maanta laga joogo 50 sano, waxa ay ku beegnayd laba dharaarood uun kaddib markii xoogaggii jabhadda Viet Cong oo garab ka helayey ciidamadii dawladdii woqooyiga Fiyetnaam ay weerarro culus ku s oo qadeen dawladda Koonfurta iyo ciidamadii Maraykanak ee xoojinayey, waxa ay jabhaddu gashay tobannaan magaalo oo Koonfurta ka mid ahaa, waxa aanay la wareegeen inta badan ee magaalada caasimadda ahayd ee Saigon, waxa aanay la wareegeen xarumihii ay deggenaayeen ciidamada Maraykanka ee ilaalada safaaradda ahaa.
Sawirka uu qaaday saxafiga Adams waxa uu ku guulaystay in la siiyo abaalmarinta caanka ah ee Pulitzer Prize oo dalka Maraykanka ka jirta, taas oo la siiyo wargeysyada, majalladaha iyo warbaahinta la mid ah ee qoran. Majaladda Times ayaa iyaduna sawirkan u aqoonsatay boqolkii sawir ee waqtigaas ugu saamaynta badnaa.
Waxaa xiise mudan in taliyihii bilayska ee hawlgalkaas fuliyey uu sawirkani ku noqday masiibo aan ka hadhin illaa maalintii uu godgalay. Markii uu Maraykanku dagaalkii joojiyey ee uu ciidamadiisa kala baxay Fiyetnaam, rag uu taliyahani ka mid ahaa waxaa loo qaaday Maraykanka iyada oo laga cabsi qabo in la waxyeelleeyo, maadaama oo uu Maraykanka xulafo la’ ahaa. Laakiin Maraykanka waxaa ku sugayey dooddii iyo cadhadii ka dhalatay sawirkan. Waxa dawladdii Maraykanka culays xooggan lagu saaray in Janaraalkan lagala noqdo sharciga deggenaanshiyaha rasmiga ah ee la siiyey. Sannadkii 1978 kii oo ay xukuumaddii jirtay u adkaysan weyday cadaadiskaasna waxa ay mar ku sigatay in ay kala noqoto sharciga ‘Green Card’ laakiin dib baa loogu dhigay. Waana sababta sawirkani uu u noqday kii keliya ee beddelay wejigii uu marka hore ku socday dagaalka Maraykanka ee Fiyetnaam.
Dadka Maraykan sawirkan ka hor waxa ay aaminsanaayeen in dawladdoodu ay dimuqraadiyadda iyo dhawrista xuquuqda aadamaha ku faafinayso dalkan, kana hortegeyso shuuciyadda, laakiin markii sawirkani soo baxay waxaa ay dadku aamineen fikir kaas ku liddi ah. Waxa ay aamineen in dawladdoodu ay dilka sharci darrada ah iyo ku tumashada xuquuqaha caawinayso, maadaama oo janaraalka falkan ku kacay uu ka mid ahaa xulafadeeda.
Janaraalkani aakhirkii iyada oo ay weli dooddaasi taagan tahay ayaa uu labaatan sano kaddib sawirkii ku dhintay gobalka Virginia ee dalka Maraykanka, halkaas oo uu maamule ka ahaa hudheel yar oo ku yaallay.
In badan ayaa la sheegaa in sawirku uu u dhigmo kun erey, waxa aana la aaminsan yahay in sawirku uu yahay hubka ugu dilaa san ee dunidan casriga ah lagu dagaallamo, waana sababta uu sawirqaadihii sawirkan qaaday u yidhi, “Janaraalkaas waxa aan ku dilay ishii kamaraddayda” mar uu la hadlayey majaladda TIME.
Laakiin sidaas oo ay tahay, haddana runta uu Adams iyo sawirqaade kasta qirsan yahay waa in sawirku aanu bixin qisada oo dhammaystiran, sidaa awgeed aan xukun lagu gaadhi karin, tusaale ahaan sawirkan buuqa siyaasadeed dhaliyey, colaaddii Fiyetnaan soo afjaray, janaraalkiina silica ku dilay, markii dib qisadiisa loogu noqday waxaa la ogaaday in maxbuus uu Janaraalku dilay aanu ahayn qudhiisu beri ahayn, balse uu dilay dhammaan xubnihii qoyska mid ka mid ah masuuliyiintii dawladda.
Previous articleMadaxwaynaha dawlada Xamar oo Markii Kowaad k hadlay Dhiibidii Qalni dhagax oo ka Tirsanaa jabhadii ONLF Ee la dagaalanta Dawlada Itooniya
Next articleMaraykanka Oo xayiraad Kusoo Rogay Sadex Shirkadood Oo Midi Soomaali tahay